I Kwesịrị Iwube ma ọ bụ Yourzụta Ngwaahịa Ahịa Gị Ọzọ? | Martech Zone
Tọzdee, Ọktoba 16, 2014 Tọzdee, Febụwarị 25, 2021 Douglas Karr
N'oge na-adịbeghị anya, edere m otu ndụmọdụ na-enye ụlọ ọrụ ndụmọdụ ghara ịnabata vidiyo nke ha. Enwere ụfọdụ nkwụghachi azụ na ya site na ụfọdụ teknụzụ nke ghọtara ins na out of video hosting. Ha nwere ezigbo isi, mana vidiyo chọrọ ndị na-ege ntị, yana ọtụtụ nyiwe akwadoro na-enye nke ahụ. Ya mere, nchikota nke ugwo bandwidth, mgbagwoju anya nke nha ihu, na njikọta, na mgbakwunye na nnweta ndị na-ege ntị bụ isi ihe kpatara m.
Nke a apụtaghị na ekwenyeghị m na ụlọ ọrụ ekwesịghị ile anya karịa idozi ngwọta ha. N'ihe banyere vidiyo, dịka ọmụmaatụ, ọtụtụ ụlọ ọrụ buru ibu ejikọtala usoro vidiyo ha njikwa ihe onwunwe dijitalụ usoro. Na-eme ka uche zuru oke!
Afọ iri gara aga mgbe ike ịme ihe dị oke ọnụ, bandwidth dị oke ọnụ, na mmepe ka a ga-eme site na ncha, ọ ga-abụrịrị igbu onwe ya maka ụlọ ọrụ iji nwaa iwulite azịza ahịa ya. Sọftụwia ahụ dị ka ndị na - enye ọrụ were ọtụtụ ijeri na ụlọ ọrụ ahụ mepee nyiwe nke ọtụtụ n’ime anyị nwere ike iji rụọ ọrụ - yabụ gịnị kpatara ị ga - eji tinye ego ahụ? Onweghi ilaghachi na ya ma ị ga-enwe obi ụtọ ma ọ bụrụ na ị ga-esi na ala.
Ọsọ ọsọ rue taa, agbanyeghị, na ịhazi ike na bandwidth bara ụba. Na mmepe ekwesịghị ime site na ọkọ. E nwere ike nyiwe mmepe ngwangwa, nyiwe data mkpokọta data dị ukwuu, yana igwe kọmịkọ nke na-eweta ọnụ ahịa dị ọnụ ala ma dịkwa ọsọ ọsọ. Ghara ikwu ọnụ ọgụgụ dị ọnụ ala nke ọnụ ala API (interface ngwanrọ ngwanrọ) na-enye ndị ahịa n'ahịa. Otu onye nrụpụta nwere ike itinye waya ya n’elu ikpo okwu ya na njikwa ndozi mkpọ ma jikọọ ya API na ihe nkeji.
Maka ebumnuche ndị a, anyị agbanweela nguzo anyị n'ọtụtụ ọnọdụ. Fọdụ ihe atụ m ga-achọ ịkọrọ:
CircuPress - Mgbe m na-ebipụta akwụkwọ akụkọ m ruo ọtụtụ iri puku ndị debanyere aha, m na-etinyekwu ego na onye na-eweta email karịa ka m na-enweta n'ego mgbasa ozi maka saịtị ahụ. N'ihi ya, mụ na enyi m rụkọrọ ọrụ iji zụlite usoro ịre ahịa email nke gbakwunyere na WordPress. Maka ego ole na ole kwa ọnwa, m na-ezipụ ọtụtụ narị puku ozi ịntanetị. Bọchị ụfọdụ, anyị ga-atụpụrụ ya onye ọ bụla!
Onye nchịkọta data SEO - Highbridge nwere onye nkwusa buru ibu nke nwere ihe kariri ọkara nde Keywords nke kwesiri ka enyocha ya geographically, site na ika, na site na isiokwu. Ndị niile na-enye ọrụ ebe ahụ ga-emeso nke a dị na ọnụọgụ ise dị elu maka ikikere - ma ọ nweghị onye n'ime ha nwere ike ijikwa olu data ha nwere. Ọzọkwa, ha nwere nhazi saịtị pụrụ iche na usoro azụmaahịa nke na-adabaghị na ikpo okwu mkpọ. Yabụ, maka ọnụahịa nke ikike na ngwanrọ ndị ọzọ, anyị enweela ike ịmepụta ikpo okwu akọwapụtara maka ụdị azụmaahịa ha. Ntinye ego ọ bụla ha mere abụghị ego na ikike ha ga - apụ - ọ na - eme ka ikpo okwu ha dị elu ma mee ka ọ rụọ ọrụ nke ọma n'ime. Ha na-echekwa oge bara uru na nhazi oge site na anyị na-arụ ụlọ maka ha.
Mara ihe - nke enyi m, Adam mepụtara n'ime afọ iri gara aga, usoro ikpo okwu Agent Sauce bụ nchịkọta modulu zuru oke - site na web, ebipụta, email, mkpanaka, ọchụchọ, mmekọrịta mmadụ na ibe ya, yana vidiyo. Adam na-eji ọrụ email ma nwee oge siri ike na-arụ ọrụ na nsogbu nke usoro ha, ya mere o wuru nke ya kama! O na - enyekwa ikpo okwu ya otutu API, na - enye onu ahia diri onu ahia nke g’ari otutu ma obu puku kwuru puku n’ime ulo oru ndi ozo. Agent Sauce na-eziga ọtụtụ nde ozi ịntanetị na ọtụtụ iri puku ederede ederede maka pennies na dollar. Adam enwewo ike inyefe ndị ahịa ya ego ndị ahụ ozugbo.
Ndị a bụ ụfọdụ ihe atụ ole na ole ebe, kama inye ikikere maka ikpo okwu nwere oke njedebe, a rụpụtara azịza ndị a n'igwe ojii, ma mgbe ụfọdụ jiri API siri ike. Ejiri ahazi ndị ọrụ ahụ maka ngwa ahụ na onye ọrụ ya, e mepụtara usoro ahụ iji hụ na ndị ọrụ nwere ike ịme ihe niile na-enweghị oke oge iji jụọ data ma ọ bụ rụọ ọrụ n'okwu ikpo okwu.
Elelịla mbọ ị ga-arụ
Enwere ndị ọzọ. Maka ebumnuche ụfọdụ, ọtụtụ ụlọ ọrụ na-ahọrọ iwupụta nke ha Nchịkọta Njikwa ọdịnaya ọ na-aghọkwa nro. Nke ahụ bụ n'ihi na ha adịghị elelị ọnụọgụ ọrụ ọ na-ewe yana ọnụọgụ atụmatụ nke sistemụ ndị ahụ nwere nke na-eme ka ịchebe saịtị maka ịdị mfe na mgbasa ozi dị mfe. Ikwesiri ịkpachara anya na nyochaa usoro ikpo okwu nke ị nwere ike ọ gaghị enwe ahụmahụ. Ọmụmaatụ, mgbe anyị wuru onwe anyị ọrụ email, anyị na-ama ndị ọkachamara na email deliverability na nnyefe… otú ahụ ka anyị were ndị niile na atụmatụ ndị ọzọ echiche.
Nrụ ọrụ ndị ahụ bụ ebe nchekwa maka ụlọ ọrụ. I nwere ike ile anya na nke a ka ị na-enyocha ego gị. Ebee ka ụgwọ ikikere gị kachasị ukwuu? Ego ole ka ọ na-efu gị iji rụọ ọrụ na njedebe nke nyiwe ndị ahụ? Kedu ụdị ego na arụmọrụ ga-abụ ụlọ ọrụ gị mara ma ọ bụrụ na ewubere ikpo okwu iji dabaa na mkpa gị karịa akụkụ ahịa niile? Ọ bụrụ na ị jiri ọnụahịa nke ikikere na mmepe kwa afọ, olee otu ị ga-esi nwee ikpo okwu nke omenala na nke ka mma karịa ahịa ahịa?
Nke a bụ oge ịmalite ikpebi ma ị ga-aga n'ihu na-azụta ihe ngwọta nke onye ọzọ, ma ọ bụ wuo ihe kachasị mma ị maara na ị nwere ike ịbanye na gas!
Tags: gị n'ụlọnga ihendoriAPIwuo ikpo okwu emailiru ma obu zutawuo seo platformọnụ mmepeọnụahịa nke onye nwe yammepe akwụ ụgwọmwekotaụgwọ onye nwe ya